Gịnị bụ na a Blog Aha? | Martech Zone
Mgbe m gụsịrị Mkparịta ụka gba ọtọ by Robert Scoble na Shel Israel, M kpebiri na m na-eme ụfọdụ mgbanwe m blog. Kacha Ichi, aha nke blog. My blog bụ nanị “Douglas Karr”Tupu, ma m mere ụfọdụ ọrụ na aha na họrọ Na Mmetụta na akpaaka. Edere m banyere ya Ebe a.
Emeela m ụfọdụ ihe ndị mara mma na saịtị ahụ, na-eji ndịna eme ihe nke ọma, isi ihe eji eserese ọhụụ na iko m na-amụmụ ọnụ ọchị, na iji nlezianya tụlee ọdịnaya ahụ. Ekwesịrị m ịsị, agbanyeghị, mgbasa ozi nke blog agbanweela kemgbe ọ gbanwere ya. Ka m na-enwetabu ụdị okporo ụzọ tupu, ugbu a ana m enweta ọtụtụ egwu.
Ọ ga-amasị m iche na naanị ụdị ọdịnaya enyerela m aka ịmatakwu ndị na-agụ akwụkwọ. Mana dịka onye na-ere ahịa nchekwa data, amaara m na mgbe ị gbanwere otu akụkụ nke mkpọsa ma debe ndị ọzọ niile - ọ na-abụkarị mgbanwe ị mere na-ebute ihe dị iche. N'okwu a ọ na-agbanwegharị blog m na aha na-adọrọ mmasị karị.
N'ezie, ọ bụrụ na m nwere aha dị ka Robert Scoble, Seth Chinekein, Malcolm Gladwell, wdg… adịghị m mkpa ime ihe ọ bụla karịrị mkpisi na elu dị ka m blog aha. Otú ọ dị, Douglas Karr amaghi ama (ma). Anaghị m azụ ahịa uhie maka ụlọ, ahapụghị ozi ọhụụ CIA, ma ekpugheghị m ihe nzuzo nke ntorobịa! Anaghị m achọ 15 nkeji nke ama, ọ bụ ezie na m ga-achọ ụfọdụ ụbọchị tinye niile nke echiche ndị a cohereherely ọnụ n'otu olu.
Obi dị m ezigbo ụtọ na ọtụtụ n’ime unu na-abịa eleta. Idebe blọgụ na-adịkarị n'uche m. Amụtala m ọtụtụ ihe n’aka ọtụtụ mmadụ na echere m na blọọgụ, ikekwe, bụ ihe kachasị mma ga - eme na ntanetị.
Tags: aha blogMalcolm obi omaaharobert scobleseth godinShel Israel
Jul 16, 2006 na 12: 13 AM
Ọ bụghị na spike dabara na Seth Godin kwuru? (Ekele na BTW). Amaara m na ọ naghị ejikọta saịtị ahụ, mana m ga-eche na mmadụ ole na ole ga-eme nyocha na aha gị. Nchịkọta nyocha ọ na-egosi nke a ma ọlị? Naanị ịmata….
Jul 16, 2006 na 9: 51 AM
Enwetara m 27 hits nke nyocha maka doug + karr ụbọchị ahụ, mana ọ nweghị ihe ọ bụla kemgbe. Ana m eji Google Analytics. Aga m akwado ịdebanye aha, ọ bara uru ọ bụrụ na ị na-anwa ịgbaso ma bulie ọgụgụ akwụkwọ blog gị. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere WordPress, ọ bụ naanị ihe ị na-edegharị ederede n'ime isiokwu isiokwu gị. Dị mfe iji bilie ma na-agba ọsọ!
Jul 16, 2006 na 5:04 PM
Enwere m mmasị na ụfọdụ nyocha nke isi nke mgbanwe ahịa. Nke a dị ihe dị ka otu ọnwa. Kedu ihe mmetụta okwu dị mkpirikpi nke ntinye akwụkwọ gị na-arụ?
Enwere m mmasị na eserese GoogleAnalytics emelitere (nwere ike ịbụ mmadụ abụọ nwere ihe mkpuchi izu isii), naanị iji hụ ma mmetụta ahụ ọ kwụsịla mgbe obere oge gasịrị, ndị ọzọ jikọtara aha ọhụrụ gị na otu njikọ-ederede ( allinurl:…).
Enwere m olileanya na ị ga-ebipụta nsonaazụ.
Jul 16, 2006 na 5:14 PM
Aga m edebe gị ma bipụta otu nsonye. M guzobere ọtụtụ mgbanwe na saịtị na mgbe niile. Achọghị m ịdabere na ewu ewu blog a, agbanyeghị. Kinddị ndị si na Mkparịta ụka gba ọtọ werekwara mmasị. A na m atụ ụjọ na nke a ga - eme ka ọnụọgụgụ m ruo n’otu ebe mmetụta ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị apụta ime mgbanwe. Ọ bụ nsogbu dị mma ịnwe!
Feb 19, 2007 n’elekere 10:33 nke abali
Enwere m mmasị na eserese GoogleAnalytics emelitere (nwere ike ịbụ mmadụ abụọ nwere ihe dị ka izu isii), naanị iji hụ ma mmetụta ahụ ọ kwụsịla mgbe obere oge gasịrị, ndị ọzọ jikọtara aha ọhụrụ gị na otu njikọ-ederede ( allinurl :?).
Feb 20, 2007 na 8:08 PM
Daalụ maka ịza ajụjụ! M na-ebipụtala nnọọ ole na ole stats kemgbe a post. Enwere m nkwado - ruo n'ókè na ugbu a, blọọgụ na-agbapụ okporo ụzọ n'oge ahụ. Nọmba ndị ahụ agbanyeghị n'okpuru ebe ọ dị na nlele ị hụrụ ka m ka kwenyere na ịgbanwe aha ahụ rụrụ nnukwu ọrụ.
Onye na-ere ọkụ
Jun 11, 2007 na 3:53 AM
daalụ maka echiche gị. Ma na Google Analytics enwere oge (maka awa 3..nwere ike 4 awa) mgbe ụfọdụ ụbọchị 1 ma eleghị anya ..
Enwere m ike ịme ihe ọ bụla maka ya? ọ bụ ihe dị ka oge? ma ọ bụ ọ bụ nsogbu genaral na nchịkọta Google?
Jul 3, 2007 na 9: 02 AM
m na-eche nsogbu a kpatara bụ ọhụrụ interface. Ugbu a ị nwere ike iji nyocha google 'ọhụrụ interface .. ọ dị ka ọ dị mma. na ọ bụ naanị 3-4 awa mbubreyo.